About Us - Qingdao Haokun Makiinado Co., Ltd
Aarayo tuuboyinka Mill
Edge axdi qarameedka Machine
Dhammeystay Machine Beveling
Biibiile End Expander
Qingdao Haokun culus Makiinado Technology Co., Ltd waa shirkad in lagu daro design, wax soo saarka iyo dhamaystirka qalabka metallurgy, rogid steel, macdanta iyo ilaalinta deegaanka. The alaabta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Toosan kama tollayn Alxanka tuuboyinka Mill (ama ERW), muquuninta Alxanka tuuboyinka Mill, Longitudinal xiirayo Production Line, Edge axdi qarameedka Machine iyo qalabka kale ee kaabayaal ah, sida Imtixaanka Hydrostatic Machine iyo biibiile dhammeystay Machine Beveling.
Shirkadda waxa uu ku yaalaa muuqaal dabiici ah Jiulong Town Industrial Park of todabaadkii City ee Qingdao ee gobolka Shandong, Shiinaha, kaas oo ah dhagax ka kor marta Container Terminal, Container Terminal ugu weyn Northern Shiinaha iska. gaadiidka The haboon keenaa xaalad aad u wanaagsan in dhoofinta qalabka culus. Waxaa intaa dheer, warshadda waa ku xiga si ay shabakadaha badan maraynaa, la Jiaozhouwan Highway ee xagga koonfureed, taas oo shaki keenaya qalabka weyn sahlanaato gaadiidka labada macaamiisha gudaha iyo dibada.
The-yada koowaad ee dhismaha warshadda qaadataa ilaa meel ka mid ah oo ku saabsan 43900 mitir oo laba jibbaaran, iyadoo hantida guud ee 89million Yuan (qiyaastii USD 13million). Shirkadda iska leh khubaro top sar ee Shiinaha ee wax soo saarka line biibiile, samaynta heer sare ah iyo talanti maamulka, 136 Farsamoyaqaan oo 39 farsamo ee heerka dhexe iyo wixii ka sareeya. Dhamaadkii 2009, Haokun qaadan doonaan in ka badan 60000 mitir kale square ay qorshaha dhismaha-yada labaad oo sida dheeraad ah, oo ay ku jiraan R a & D Center iyo warshad wax soo saarka laymanka biibiile. Barashada xan shirkadda kale, waa inay dhawraan on innovating by baafinta horumarinta hababka sare iyo teknoolajiyada shirkadaha shisheeye, oo si nidaamsan u falanqeeyaan dhaqanka muhiim ah qoyska. Ilaa hadda tiro ka mid ah macaamiisha dibada bixisay booqashada for on-site cilmi, iskaashiga maalgashiga.
Inta lagu guda jiro sano ee la soo dhaafay tan iyo markii uu dhismaha shirkadda, waxa ay bixisey in Zhejiang Huzhou Jiuli Group, Baoji Petroleum Steel tuuboyinka Co., Ltd, Shanghai BSW Petro-yeelida tuuboyinka Co., Ltd iyo Fengyu Company Private Singapore, la Hydrotester ee 1200 ton, 2000 ton iyo 2800 ton siday u kala horreeyaan, iyo biibiile darafyadiisa Beveling Machines of Φ1620mm, Φ820mm, Φ2540mm, la caddaymaha kala duwan. Isla muddadaas waqti, dhowr steel-fasalka sare oo ku daqiijin jireen alxanka-biibiile dhexroor weyn ayaa dhisay iyo rido hawlgalka, ka mid ah waxa ay ahaayeen laba ERW24 '' ku daqiijin jireen si toos ah alxanka tollayn biibiile ballaciisu yahay ee ugu weyn gudaha Shiinaha for Company tuuboyinka Liaoyang Large iyo Guangzhou Juyi Steel tuuboyinka Co., Ltd, saddex muquuninta Alxanka tuuboyinka Mills la fasalka birta sare ah X80 andΦ1422mm for Yangzhou Tongya Steel tuuboyinka CP., Ltd iyo Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Ilaa hadda ka badan shan halbeeg ayaa heer hoggaamineed gudaha iyo koonfurta iyo galbeedka Aasiya labadaba.
Company Haokun ayaa si joogto ah la qabtaa falsafada ganacsi oo ka mid ah "First Quality, waari Contract, Orientation Macaamiisha iyo Adeega ugu wanaagsan" iyo kal iyo laab ah bixisaa macaamiisha gudaha iyo dibada labadaba adeegyada sida xal u hesho dhibaatooyinka adag-lowska ee sayniska iyo tiknoolajiyada, design baakadeeyey, processing iyo wax soo saarka, rakibaadda iyo imtixaanka, kala iibsiga technology iyo la talinta farsamada, goobaha metallurgy, rogid steel, macdanta iyo ilaalinta deegaanka. Company Haokun ayaa iyo doonaa had iyo jeer in si dhab ah ahaanayta, caalami ah iyo xajinta saarayaasha biibiile alxanka fiican. Ujeedadayadu kaliya waa in ay ganacsi ugu horeysay ee horyaalka heerka!
No. 20 Taishan Road, Industrial Zone Of Jiulong Town, todabaadkii City, Qingdao, Gobolka Shandong, Shiinaha